Dumarka maxey ku jecelyihiin raga lugaha gaaban taloo ma geedkoodaa xoog wayne ah - iftineducation.com
Dumarka maxey ku jecelyihiin raga lugaha gaaban taloo ma geedkoodaa xoog wayne ah
iftineducation.com – Dumarkuna waxa ay jecel yihiin ragga lugaha gaa-gaaban. Arintana waxa soo bandhigay culumo maraykan ah kadib marki ay baadhitaan sameeyeen.
-Khuburada cilmibaaritaanka sameeyay ayaa waxa ay sheegeen in qaab dhismeedka jirka ee ninku leeyahay ee dumarku ka helaan uu yahay garbo dhaadheer, jirka sare oo dheer iyo lugo gaa-gaaban. Khuburaduna waxa ay arintan ka soo saareen markii ay 87 dumar tuseen sawiro rag. Kadibna la waydiiayay sawirada ay ka heleen. Intii badnaydna waxa ay isku raacday ragga qaab jir dhismeedka aan kor ku soo sheegnay leh.
-Hadii la raaco daraasadan waxa la odhan karaa in ragga qaab jir dhismeedkan noocan ah leh ay ka mid yihiin xidiga Christian Bale iyo dabaalyahanka caanka ah ee Michael Phelps.
-Laakiin marka laga hadlayo qaab jir dhismeedka ay ragu jecelyihiina ayaa ah mid ka duwam ka dumarka. Qaab jir dhismeedkaas oo ah in ay gabadhu lahaadaan jir kore oo gaaban, lugo dhaadheer iyo misko wareegsan.
-Si kastaba ha loo dhigo ama ha loo baaro laakiin arin lama huraan ahi waa in aan ogaanaa in dadku quruxda si u wada arag.
Saadaasha Siyaasadda Akhri “Mugdi ayaa beddeli raba iftiinkii”